ကျဆုံးသွားတဲ့ ဝမ်းတွင်းမြို့က ဆရာဝန်လေးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ပြည်သူများ…. – Cele Oscar
ကျဆုံးသွားတဲ့ ဝမ်းတွင်းမြို့က ဆရာဝန်လေးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ပြည်သူများ….
March 29, 2021 By L YC News
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ (၂၇) ရက် နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ တော်တော် များများ က အန္တရာယ်တွေ ကြားကနေ လမ်းပေါ် ကိုရအောင် ထွက်လာပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခွန်အား ရှိသမျှ ကြိုးစား နေကြတဲ့ ပြည်သူ တွေက လူစု ခွဲဖြိုခွင်းမှုတွေ နဲ့လည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မနေ့က ဆိုရင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ အသက် ဆုံးရှုံးသွား ရတဲ့ ပြည်သူ တွေ အများ အပြား ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း တွေ ထဲမှာ နိုင်ငံ အတွက် တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာတတ် လူငယ်တွေ လည်း ပါဝင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝမ်းတွင်း မြို့မှာ ကျဆုံးသွား ခဲ့ရ တဲ့ ကိုဖြိုး သက်ဝေ ကလည်း မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ် ကနေ ဘွဲ့ရ ရှိ ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ လူနာတွေ ရဲ့ အသက်တွေ ကို ကယ်တင်ပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် တစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက် ရပြီဖြစ်တာ ကြောင့် ပြည်သူတွေ အနေ နဲ့ လည်း တကယ့်ကို ဝမ်းနည်း ကြွေကွဲ နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကျည်ထိ မှန်သွား တဲ့ ဒေါက်တာ ဖြိုးသက်ဝေ ကို ကယ်တင် ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ ပုံရိပ် တစ်ချို့ကလည်း လတ် တလော လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာ ထက်မှာ ပျံ့နှံ့ လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုင်ကယ် ပေါ်ကနေ လဲကျ သွားတဲ့ ဒေါက်တာ ဖြိုးသက် ဝေကို အနီးအနား မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ တွေက ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ သေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် ဒေါက်တာ ဖြိုးသက်ဝေ အတွက် သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အပါအဝင် အားလုံးက အရမ်းကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝမ်းတွင်း မြို့မှာ ကျဆုံး သွားခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဖြိုးသက်ဝေ ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
Source & Photo Credit- MM LOAD
ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ (၂၇) ရကျ နမှေ့ာတော့ မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့အပွားမှာ ရှိတဲ့ ပွညျသူတှေ တျောတျော မြားမြား က အန်တရာယျတှေ ကွားကနေ လမျးပျေါ ကိုရအောငျ ထှကျလာပွီး ဆန်ဒ ထုတျဖျောခဲ့ ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ ခှနျအား ရှိသမြှ ကွိုးစား နကွေတဲ့ ပွညျသူ တှကေ လူစု ခှဲဖွိုခှငျးမှုတှေ နဲ့လညျး ကွုံတှေ့ ခဲ့ ရတာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မနကေ့ ဆိုရငျ မွနျမာ တဈနိုငျငံ လုံးမှာ အသကျ ဆုံးရှုံးသှား ရတဲ့ ပွညျသူ တှေ အမြား အပွား ရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ကွှလှေငျ့ သှားတဲ့ သူရဲကောငျး တှေ ထဲမှာ နိုငျငံ အတှကျ တကယျ့ကို တနျဖိုးရှိတဲ့ ပညာတတျ လူငယျတှေ လညျး ပါဝငျ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဝမျးတှငျး မွို့မှာ ကဆြုံးသှား ခဲ့ရ တဲ့ ကိုဖွိုး သကျဝေ ကလညျး မန်တလေး ဆေးတက်ကသိုလျ ကနေ ဘှဲ့ရ ရှိ ခဲ့တဲ့ ဆရာဝနျ တဈဦး ဖွဈပါတယျ ။ လူနာတှေ ရဲ့ အသကျတှေ ကို ကယျတငျပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျ တဈဦးကို ဆုံးရှုံးလိုကျ ရပွီဖွဈတာ ကွောငျ့ ပွညျသူတှေ အနေ နဲ့ လညျး တကယျ့ကို ဝမျးနညျး ကွှကှေဲ နရေတာ ဖွဈပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ကညျြထိ မှနျသှား တဲ့ ဒေါကျတာ ဖွိုးသကျဝေ ကို ကယျတငျ ဖို့ ကွိုးစားခဲ့ ကွတဲ့ ပွညျသူတှေ ရဲ့ ပုံရိပျ တဈခြို့ကလညျး လတျ တလော လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာ ထကျမှာ ပြံ့နှံ့ လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဆိုငျကယျ ပျေါကနေ လဲကြ သှားတဲ့ ဒေါကျတာ ဖွိုးသကျ ဝကေို အနီးအနား မှာရှိတဲ့ ပွညျသူ တှကေ ဝိုငျးဝနျးကူညီခဲ့ သေးတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုဆိုရငျ ဒေါကျတာ ဖွိုးသကျဝေ အတှကျ သူ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှေ အပါအဝငျ အားလုံးက အရမျးကို စိတျမကောငျး ဖွဈနရေတာ ဖွဈပါတယျ ။ ဝမျးတှငျး မွို့မှာ ကဆြုံး သှားခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာဖွိုးသကျဝေ ရဲ့ ပုံရိပျတှေ ကို ပွနျလညျ ဖျောပွ ပေးလိုကျ ရပါတယျ။
မီးဘေးသင့်ခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးကပြည်သူတွေကို အိမ်သုံးပစ္စည်းနဲ့အလှူငွေတွေ လှူဒါန်းပေးပြီး ကူညီမှုတွေပေးနေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း….
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး မှ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သတိပေး နိုးဆော်ခြင်း…….